China Mineral Fiber Ceiling BH002 fekitori uye Vagadziri | Beihua
saizi inogona kuve yakagadzirwa-yakagadzirwa
Maitiro ekugadzira madhodhi emachira emachira akaomeswa, kunyanya anosanganisira wet wetdrinier waya kuteedzera, yakanyorovera rotary screen kutevedzera, yakaoma pasting uye yekuumba nzira, semi-yakaoma nzira, nezvimwewo kambani yedu yekuenzanisira yekugadzirwa line inotora yakanyorova ina drinier waya kugadzira, kuburikidza nekukwevera, ina kudhonza waya kunhonga, kushaya mvura, kutsvedza, kuoma, kutsemuka, kupuruzira, uye kupedza.
1. Isa imwe huwandu hwemveretu yemaminerari mumudziyo uye bvisa nemvura kuti iparadzanise machira kubva kune slag bhora. Bhora re slag rinonyura pasi. Izvo zvinowedzera senge zvinonamatira uye mvura zvinodzokerwa zvakasanganiswa uye zvinokurudzirwa mukutsvedza zvinoenderana nehuremu, uye zvobva zvaumbwa pamushini ina. Mukuita uku, slurry inosvina, vacuum-inonwa, uye inoiswa mune yakashata isina chinhu yehuhu hwakati. Mushure mekucheka, yakaomeswa kuti iite iyo mineral wool substrate board.
2. Icho chigadzirwa chakapetwa chakapetwa kuti chibudise maburi asina kukwana ehukuru hwakasiyana uye masikisi kuti awedzere kunyatsoita sauti, uye ozopedzisa kumucheto, kupenda, uye kuoma.
Kukura kwacho kunogona kugadzirwa pa55x595mm, 600x600mm, 603x603mm, 610x610mm, 625x625mm, 603x1212mm, 595x1195mm, 600x1200mm, etc. Kurema ndiko 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm Maitiro epasi ipini gomba, akajeka fissured, honye, ​​jecha kapisheni, glacier, etc. Iyo mineral mvere bhodhi inogona sautiproof, kupisa-insulated, uye moto-chiratidzo. Chero chero chigadzirwa chisina asbestos, hachina kukuvadza kumuviri wemunhu uye chine basa rekurwisa-sagging. Iyo inoshandiswa kwazvo mumarudzi akasiyana-siyana ekuvaka dzimba uye madziro-akaiswa mukati mekashongedzo; senge mahotera, maresitorendi, dzimba dzemitambo, dzimba dzekushambadzira, mahofisi, dzimba dzekutepfenyura, studio, makamuri emakomputa uye zvivakwa zveindasitiri.
Nzira dzekuchengetera yekuisa mineral wool board
1. Munguva yekuiswa kweyemineral wool board, kamuri rinofanira kuvharwa kuitira kudzivirira mweya unonyoro kupinda, kana zvicherwa zvicherwa.
2. Munguva yekugadziriswa kwekuisa, vashandi vanofanirwa kupfeka magurovhosi akachena kuti ivhu remaminerodhi bhodhi rive rakachena.
Yepfuura: Mineral Fiber Ceiling BC004
Inotevera: Mineral Fiber Ceiling BC005